राहतका लागि प्रहरीको तलब कटौती सही कि गलत ? अवकाश प्राप्त प्रहरी उच्च अधिकृतको प्रतिक्रिया - Himali Patrika
राहतका लागि प्रहरीको तलब कटौती सही कि गलत ? अवकाश प्राप्त प्रहरी उच्च अधिकृतको प्रतिक्रिया
हिमाली पत्रिका २७ चैत्र २०७६, 2:35 pm
२७ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्न स्वास्थ्यकर्मीसँगै सुरक्षाकर्मी फ्रन्टलाइनमा खटिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन कार्यान्वयमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरु अग्रपङ्तिमा छन् ।
सुरक्षाकर्मीहरु व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको नाममा सर्जिकल मास्कसमेत नलगाई कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् । भोक, तिर्खाकोसमेत पर्वाह गरी नागरिकको सुरक्षामा खटिएका उनीहरुलाई सरकारले पनि सुरक्षाकर्मीलाई शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
तर, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले ‘कोरोना उपचार राहत कोष’मा रकम जम्मा गर्न भन्दै अधिकृतहरुलाई तलबको रकम कटौती गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।